netzay.com.mm : Myanmar Online Shopping, Shopping Websites:အိမ်သုံးကုန်နှင့်စားသောက်ကုန်များ
Shwe Phe Oo Green Tea 50G(25 tea Bags)
-မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ နမ့်ဆမ်တောင်တန်းဒေသမှထွက်ရှိသော သဘာဝစစ်စစ်လက်ဖက်ရွက်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် စစ်မှန်သောထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါသည်။
Duwun Chia Seed
ကိုယ်ခန္ဓာ အလေးချိန် ထိန်းသိမ်းခြင်သူများအတွက်အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။
Omega 3,Fiber နှင့် Protein ဓာတ်တို့ အချိုးအဆ မျှတစွာပါဝင်ပါတယ်။
Net Weight 300g/serving size 15g
Baide Bikini Design Lighter E25
-1200 g သာအလေးချိန်ရှိခြင်း
-နူးညံ့အိစက်သော အထိအတွေ့ ဆွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ကောက်ကြောင်း ထူးခြားသော အသွင်အပြင်
Baide Bikini Design Lighter Yellow-Purple E25
Baide Bikini Design Lighter Yellow-Blue E25
REMAX Purple RT- CUP30 Wish Water Bottle
-Material: PC+ Silica gel + high boron silicon glass
-Portable silicone handle, easy to carry
-CTN G.W.:15KG; CTN SIZE:47*39.5*30cm
REMAX Red RT- CUP30 Wish Water Bottle
REMAX Green RT- CUP30 Wish Water Bottle
REMAX Yellow RT- CUP25 Fruit Glass Cup
-Material:high boron silicon glass
-CTN G.W.:13KG; CTN SIZE:54x34.5x24cm
REMAX Red RT- CUP25 Fruit Glass Cup
REMAX Green RT- CUP25 Fruit Glass Cup
REMAX Pink RT- CUP31 Lotton Series Water Bottle
REMAX Red RT- CUP31 Lotton Series Water Bottle
REMAX Green RT- CUP31 Lotton Series Water Bottle
Remax Yellow Transparent Umbrella RT-U5
-ကိုင်း (၈)ကိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားလို့ လေဒဏ်၊ မိုးဒဏ်ကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ solid nichrome frame, metal ribs နှင့် POE တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် အလွယ်တကူပျက်စီးခြင်းမရှိပါ။ ပေါ့ပါးစွာနဲ့ သွားလေရာကို သယ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
Remax Purple Transparent Umbrella RT-U5
Remax Blue Transparent Umbrella RT-U5
Min: 100(Ks) Max: 525,000(Ks)
All Food Health အခြားပစ္စည်းများ အိတ်များ
All Clothes Wash Cup Hand Gel Hand Wash Juice Lighter Medical Milk Oil Towel Umbrella ခါးပတ်များ မီးသတိပေးစနစ် မီးသတ်ဘူး လက်ဖက်ခြောက်/တီးမစ် အသစ်အဆန်းများ အိတ်များ ရေဘူး
All 95 Myanmar Asia Crystal Ocean D'nae Duwun Chia Seed GR8-SHOP Punyoma Remax Shwe Phe Oo
All English Breakfast Tea Finest Myanmar Tea Green Tea Jasmine Tea Leamon Tea Special Premium
All Pink Green Blue Orange Black Gold Silver Red Yellow Army Green Purple White Grey
All GIVE ME YOUR NUMBER AMERICAN FLAG
All 400 g 1000 g 600 ml2lit 500 ml 50 ml ၁ ကတ် ( ၂၅လုံး) ၁ ပုံး ( ၂၀ ကတ် + Delivery Free ) 130 g
All 24g 207ml 300g 150g 250g 200g 100g 50g
All Remax Duwun Chia Seed D'Nae Nature First Alert နဂါးပျံလက်ဖက်ခြောက် Old Town Coffee Marigold Cricket Shwe Phe Oo iLite Asia BAIDE Angel